Toerana fikarakarana volo sy tarehy Nihena hatrany amin’ny 75 % ireo mpanjifa
HAFARI Malagasy Hizara tany eny Antanandrano
Hiverina amin’ny heriny tanteraka ny Fikambanana HAFARI Malagasy tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina taorian’ny fihibohana nateraky ny fiparitahan’ny valan’aretina Covid 19
Hofan-trano, faktiora amin`ny vola vahiny Tsy maintsy atao amin’ny Ariary manomboka izao
Ao anatin` ny lamin'ny tanjona kendreny sy ny iraka ampanaovina azy, dia mampahafantatra ny Banky Foiben`i Madagasikara (BFM) amin` ny fametrahana ny fifanarahana fifanarahana fampanofana sy faktiora ary ny fandoavana izany amin`ny ariary.
Lehilahy mamo lava Darohany ny vadiny, navariny an-tevana ny zanany
Raim-pianakaviana iray mpamono vady aman-janaka isan’andro no voatery naiditra am-ponja vonjimaika tany Antsahabary Soavinandriana Itasy ny faran’ny herinandro teo.
Faritra Atsimo Mifampiankina ny fiarovana ny ala sy ny famatsiana rano
Manana velarana ala voajanahary midadasika ahitana karazam-biby maro toy ny vorona, varika ary bibilava ny Faritra arovana Tsitongambarika.
Amboasary Atsimo Manomboka ny fanisana ireo tena marefo ara-tsakafo
Nanomboka ny alarobia 21 Oktobra teo ny fanisana ireo olona izay tena ianjadian'ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny Kaominina Amboasary Atsimo, faritra Anosy.Miara-manatontosa izany ireo mpiasan'ny fahasalama miisa 38, miaramila 38 , Croix Rouge 19 ary mpanaramaso 10.
CMH – Antananarivo renivohitra 451 ireo fandikan-dalàna tao anatin’ny iray volana
Nitohy tetsy amin`ny lapan`ny tanàna Analakely ny fampiofanana izay nataon` ny CUA mikasika ny fampahafantarana sy fampatsiahivina ireo fehezam-pitsipika monisipaly misahana ny fikolokolom-pahasalamana (CMH) izay andiany fahaefatra.
Tantsaha eny ifotony Nangataka toerana hahafahany mivarotra vokatra bio
Efa mifangaro be eny an-tsena amin’izao ireo karazam-bokatra nampiasana ny akora simika sy ireo tena mbola bio (voajanahary) na tsy nampiasa akory simika hoy isika.
Saika mahita faisana vokatry ny fiparitahan’ny tsimok’aretina coronavirus avokoa ankehitriny ny asa fihariana rehetra. Anisan’ny miaina izany ireo mpanao volo eto an-drenivohitra raha araka ny fanadihadiana natao.
Nihena hatramin’ny 75 % mantsy ireo mpanjifan’izy ireo. Ireo izay tsy maintsy manao volo ihany sisa no tsy maintsy manao izany hoy ny Renim-pianakaviana tompona toerana fanaovam-bolo iray toy ireo avy manasa loha ohatra ka efa zatra manao brushing na ireo tsy maintsy mandoko volo. Ny ankoatra izay hoy izy dia lasa mirandrana, na tsy manao volo mihitsy fa mitaiza izany amin’ny alalan’ny akora natoraly eny hatramin’ny tarehy aza. Miaina anaty fihibohana rahateo isika hoy hatrany ity Renim-pianakaviana ity ka manam-potoana kokoa hikarakaram-batana ao an-trano ny Renim-pianakaviana. Tsiahivina moa fa 50%-n’ny karaman’ireo olona miasa amin’ny toerana fanaovam-bolo sisa no raisin’izy ireo ankehitriny. Mifandimby izy ireo miasa isan’andro manomboka amin’ny 07 ora maraina ka hatramin’ny 01 ora folakandro.